Home » သတင်း » ကှတျချ Anamorphic / i SF 65mm အနီးကပ်တစ်ဦးကစတားသည်မှေးဖှား Up ကိုပိတ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများရရှိစေ
ကှတျချ Anamorphic / i SF 65mm အနီးကပ်တစ်ဦးကစတားသည်မှေးဖှား Up ကိုပိတ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများရရှိစေ
ရှိပြီးသား 2018 အနိုင်ရသူမဿဲ Libatique, ASC, ဟောလိဝုဒ် Warner Bros. ရုပ်ပုံများအပေါ်သူ၏အလုပ်အတွက်တစ်နှစ်တာ၏ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်များအတွက်ရုပ်ရှင်ဆုချီးမြှင့် '' တစ်ဦးကစတားမွေးဖွားသည်, မှယုံကြည်လိမ့်မယ်လို့တစ်လမ်းထဲမှာမျက်နှာသစ်မဟာမိတ်များ (လေဒီဂါဂါ) ကို - သူကသူ့ကိုအဓိကစူပါစတားဇာတ်ကောင်ဂျက် (စညွှန်ကြားထားတဲ့သူ Bradley Cooper) မှဇာတ်လမ်းရွှေ့ကူညီဖို့ကှတျချ Anamorphic / i SF '' အထူးအသွင် '' မျက်ကပ်မှန်ကိုအသုံးပြုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်ကို။
တစ်ဦးကစတားမွေးဖွားသည် ဒါ့အပြင် set ကိုအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသော '' ပွင့်လင်း '' လုပ်ငန်းအသွားအလာအကြောင်းကိုဆောင်ခဲ့သော Cooper ကရဲ့ဒါရိုက်တာပွဲဦးထွက်ခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ကအစောပိုင်းအပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့," Libatique ကဆိုသည်။ သရုပ်ဆောင်, ညွှန်ကြားချက်, ဂီတ: "သင်အများကြီးဦးထုပ်နှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်လူတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ငါ့ကို - - ငါတို့သည်ပုံမှန်ထွက်မကြည့်ကြဘူးအရာများအတွက်စောင့်ကြည့်သူတို့ကသာမန်အားဖြင့်ပါလိမ့်မယ်ထက်အများကြီးပိုပြီးတာဝန်ရှိ set အပေါ်လူတိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘယ်လိုအမှုအရာတစ်ဦးမြင်ကွင်းတစ်ခု Bradley ရဲ့သရုပ်ဆောင်ကြောင်းသွားပုံကို, သူတို့ကအသံဘယ်လိုကြည့်ရှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ယာဉ်ဘို့ပဲတာဝန်ယူကြဘူး။ "
Cooper ကပစ်ခတ်မှု anamorphic အပေါ်သတ်မှတ်ထားနှင့်အတူ, Libatique ညာဘက်မှန်ဘီလူးကိုရှာဖွေခဲ့ရတယ်။ "ငါသည်ချက်ပြုတ် S4 ကိုအသုံးပြုပါတယ် / i အချိန်ကြာမြင့်စွာအပေါင်းဟောင်း Panchro ဖန်များအတွက် spherical, ဒါပေမယ့်ငါအလင်း hits နှင့်နေမီးတောက်၏ညာဘက်ငွေပမာဏနှင့်အတူ setting များကိုအမျိုးမျိုးအတွက်အပြစ်ကင်းစင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ဇာတ်ကောင်များနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ anamorphic လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ချက်ပြုတ် Anamorphic / i SF Prime သူတွေကိုမျက်ကပ်မှန်ကြတယ်။ "
သူကရုပ်ရှင်၏ 25-32% အတွက်အသုံးပြုရသော 40 / 50 / 65 / 75 / 100 Macro / 85 / 90mm, အ 40, 50, 65 Macro နှင့် 75 အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းနှင့်အတူ: Libatique Anamorphic / i SF primes ခုနစျပါး၏အကွာအဝေးခဲ့ အများဆုံး။
"ဒီ 65 Macro ဂိမ်း changer ပါပဲ" ဟု Libatique ကဆိုသည်။ "ဒါဟာသင်ရုံတစ်လုံးနဲ့တူနီးစပ်သည့်သရုပ်ဆောင်များကိုမှတက်ရပေးနိုင်ပါတယ်တစ်ခု anamorphic ပါပဲ။ ငါလွှတ်3ပေဖြစ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်တဦးတည်းခြေလျင်ကွာ, ပေးကမ်းခြင်းမပြုခဲ့ တစ်ဦးကစတားမွေးဖွားသည် ယင်း၏အများဆုံးသိသိသာသာရိုက်ချက်များ။ ဒါဟာအံ့မခန်းမှန်ဘီလူးပါပဲ။ ဂျက်နှင့်မဟာမိတ်များရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာငါ 65 Macro သုံးပြီးလေဒီဂါဂါရဲ့မျက်နှာ၏ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအအနီးကပ်တက်ရတယ်။ မှန်ဘီလူး၏နီးကပ်တစ်ခု anamorphic ဘာလုပ်သင့်သောအရာကိုကျော်လွန်ဖြစ်၏။ "
ချက်ပြုတ် 65mm Macro Anamorphic / i SF 2X ချုပ်မှန်ဘီလူးတစ် 4.1 အတူအနီးကပ်များအတွက်စံပြဖြစ်ပါသည်: မှန်ဘီလူး၏ရှေ့ကနေ 1 ၏အနီးကပ်အာရုံစိုက် "နဲ့ 5.5 ချဲ့အချိုးအစား။ အဆိုပါဘဲဥပုံ bokeh နှင့် anamorphic ကြည့်နှင့်အတူပြောရလျှင်များမှာအခြားထစ်အငေါ့ဆက်ပြီးနေစဉ်အထူးဖွံ့ဖြိုး '' အထူးအသွင် '' အပေါ်ယံပိုင်းပိုမိုမီးတောက်ကထပ်ပြောသည်။ ဒါကအဓိကဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းရုပ်ရှင်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေသူတွေကိုထံမှအမျိုးသားရေးကြော်ငြာအထိရိုက်ကူးရေးမှတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် artistry ၏အသစ်တခုအဆင့်ကိုဆောင်တတ်၏။
"ချက်ပြုတ် Anamorphic / i SF မှန်ဘီလူးတွေအကြောင်းအခြားကြီးသောအမှုတို့ကိုတစ်ခုမှာသူတို့ကယ့်ကိုကြည့်ရှုပုံကိုနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောနေကြတယ်" ဟု Libatique ကဆက်ပြောသည်။ အမျိုးသားများအတွက် !!! "ဟုအဆိုပါရုပ်ရှင်၏အစအဦးမှာမဟာမိတ်အော်ဟစ်တဲ့ရေချိုးခန်းတင်းကုပ်ရိုက်ချက်ရှိပါတယ်" "ဒါပေမယ့်ငါ 32 အပေါ်ကျယ်ပြန့်အလုံအလောက်မရနိုင်ဘူး။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး AC အပု 25 အကြံပြုသည်။ ငါကနဦးချီတုံချတုံဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်လုံးဝပြားချပ်ချပ်ပဲ! အများအားဖြင့်, သင်က 40 ထက်ပိုမိုကျယ်ပြန်ဘာမှအပေါ်အချို့သောကွေးရပေမယ့် 25 လုံးဝစုံလင်ခြင်းရှိ၏။ ကျနော်တို့ [ကိုလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ segments များသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ရာဂျူဒီပန်းကုံး, သရုပ်ဆောင်အစောပိုင်း 32 ဗားရှင်းတစ်ဦးကိုကိုးကွယ်] အဆိုပါဘုန်းကြီးကျောင်းပရိသတ်ခန်းမမှာလေဒီဂါဂါ၏အလွန်ကျယ်ပြန့် upstage ရိုက်ချက်များအတွက် 1954 အသုံးပြုသောအခါ, မှန်ဘီလူးန်းကျင်အနည်းငယ်သာအာရုံစိုက် falloff ရှိ၏။ "
Cooper ကနှင့်လေဒီဂါဂါဟာသူတို့ရဲ့အတွင်း၎င်းတို့၏ဇာတ်ကောင်ကိုရှာဖွေအဖြစ်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အလွန်များအာရုံပြံ့လှငျ့ရှိသည်ဖို့လို, မတစ်ဦး ARRI Alexa Mini ကို, anti-ဆွဲငင်အားတူးစင် stabilizer တူးစင်ပေါ်တွင် (အပိုကြီးတဲ့ကှတျချ 65mm Macro ချုပ်မှန်ဘီလူး မှလွဲ. ) ရုပ်ရှင်အတူလက်ကိုင်အသုံးပြုခဲ့သည် ကြားဆက်ဆံရေး။ "ဒီ Alexa Mini ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအာရုံခံကိရိယာတွေနဲ့ပေါင်းစပ် mobility အဘို့ကြီးစွာသောပုံစံအချက်ရှိပါတယ်" ဟု Libatique ကဆိုသည်။ "ကျွန်မကင်မရာတစ်ခုလုံးကိုအချိန်မိုဘိုင်းပါလိမ့်မယ်သိတယ်။ "
Libatique များအတွက်ချက်ပြုတ် Anamorphic / i SF Prime သူလိုအပ်သမျှကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ "ဒီ modular နှင့် optical အရည်အသွေးကိုပြိုင်ဘက် - ထက်မလွန်မရရှိလျှင် - ။ တခြားဘာမှထွက်ရှိ anamorphic မျက်ကပ်မှန်ထဲမှာ" အမှန်မှာ, ချက်ပြုတ် Anamorphic / i Prime, Libatique လညျးမိမိအလွန်လာမည့်ရုပ်ရှင်ပေါ်သူတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့, ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းဖျော်ဖြေ အဆိပ်.
"ဒါဟာကျွန်မနောက်လာမည့်တစီမံကိန်းအတွက်ကနေတူညီတဲ့မျက်ကပ်မှန်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်အလွန်ရှားပါးနေပါတယ်" Libatique ကဆိုသည်။ "ငါသည်များသောအားဖြင့်ကထရောမွှေဖို့ကြိုးစားပါ။ သို့သော်မရဤအချိန်။ "
Films at 59 Installs Pixit Media’s PixStor For High-Performance Central Storage to Address Rising 4K Content Demand - မေလ 24, 2019
PHABRIX appoints Joseph Roncon as VP of Sales for North America - မေလ 23, 2019
Todd A. Dos Reis, ASC chooses two Cooke lens systems to depict two worlds for David Makes Man - မေလ 22, 2019
တစ်ဦးကစတားမွေးဖွားသည် Anamorphic / i ARRI Alexa Mini ကို ကှတျချစက္ခုဗေဒ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor	2019-01-16
ယခင်: ခြုံငုံ ZIXI နှငျ့ပူးပေါငျးကိုကြေညာ
နောက်တစ်ခု: ကုမ္ပဏီ File Transfer အပြင်စေ့ဆျောပေးအဖြစ် Signiant ယင်း၏ကြီးမားတဲ့မီဒီယာ Footprint တိုးမြှင် 2018 အတွက်မကြုံဖူးသောကြီးထွားပွဲပြုလုပ်